The West Africa Examinations Council (WAEC) has announced the release of the results of the 2019 West Africa Senior School Certificate Examination (WASSCE) for private candidates. Archives - 2020/2021
Tag Archives: The West Africa Examinations Council (WAEC) has announced the release of the results of the 2019 West Africa Senior School Certificate Examination (WASSCE) for private candidates.
2019 NovDec Results are out
West Africa Examinations Council (WAEC) have released the 2019 NovDec Results The West Africa Examinations Council (WAEC) has announced the release of the results of the 2019 West Africa Senior School Certificate Examination (WASSCE) for private candidates. The Council recorded a total of 5, 145 candidates who were absent for the examination. The council also cautioned the public… Read More »
Notices NOV/DEC WAEC
NovDec Results The West Africa Examinations Council (WAEC) has announced the release of the results of the 2019 West Africa Senior School Certificate Examination (WASSCE) for private candidates. West Africa Examinations Council (WAEC) have released the 2019 NovDec Results